Gingilchaawwan XML LibreOfficetiin hojechuu
LibreOffice galmeewwan dhangii XMLtiin kuusa. Gingilchaawwan maamileesamman dhangii faayilii XML Open Dokumentii dhalootaa kan LibreOfficetiin fayyadamu irraa gara dhangii birootti jijjiiru uumuu ni dandeessa. Gingilchaawwan kuni LibreOffice keessatti gamtaa'ani yoo barbaadde dhangiiwwan kan iftoominaan olkaa'uu ykn fe'uu ni dandeessa.
Gingilchaa XML uumuuf, yaadundee XML fi XSLT sirriitti beekuu qabda. Yaadundeewwan kuni humna gargaarsa kanaa oli dha.
Gingilchaan XML Wardii akkaataa kan afaan XSLT tiin barreefaman offkeessatti qabata. Wardiin akkaataa kuni geedarama dhangii faayilii Open Documentii irraa gara dhangii XML kan biroottii alerguu fi alaaguu tiin qindeessa. Kuni akkaakuu sadi gingilchaa XML dha:
Gingilchaawwan XML Tamsaasuu
Gingilchaawwan XML Uumuu fi Yaaluu
Title is: Gingilchaawwan XML %PRODUCTNAMEtiin hojechuu